Hupamhi hwemusuwo mukati mechivako waunogara uchishanyira
Icho chiyero icho hachina kumbobvira chakasimudzwa kana kutaurwa nezvacho. Kusangana ne ADA inowanikwa, mikova inofanirwa kuve neupamhi hwakajeka hwe32 inches kubva kumeso kwemusuwo kuenda pakatarisana nekumira. Vanhu mukati mavhiripu vanofanira kufunga pamusoro peizvi kamwechete pazuva, nokuti ivo ndivo vanotoda kuva nemvumo yakakwana ye wiricheya kukwana nepasuo.
Ichi ndicho chikonzero chidimbu ichi chakanyorwa, kuunza ruzivo kune chokwadi chekuti chivako chimwe nechimwe muAmerica chinofanirwa kuve nehupamhi hwemukova unodiwa pamagonhi ese pane chero chivakwa. Chati iri pamusoro inoratidza hupamhi hwakavhurika uye hupamhi hwepedyo hwese zvedu mavhiripu. Ndokumbira utarise hupamhi hwakavhurika mugirini kuti uve nechokwadi chekuti yako wiricheya inogona kukwana nyore nepasuo rako. Pamusoro pekukodzera chete, iwe waizoda nzvimbo yakakwana yekufambisa uye kuti usabatise maoko ako nekukuvadza. Izvi zvese zvinhu zvakakosha kwazvo mu kufamba mukati mekugara fomu imba kune imwe kamuri uye kufamba kwemazuva ese.
Mimwe mikova yakadai semakamuri ekugara uye horo huru inowanzo kuve yakakura kudarika yekugezera kana yemadhirowa madhoo. Iwe uchazoda kuona kuti iwe unoteedzera maitiro ako ezuva nezuva uye chii chiri kufambidzana. Kazhinji pasina kuenda kune bariatric mhando yewiricheya, haufanirwe kunge uine yakawanda dambudziko mudhipatimendi iri.
Resizing a Doorway for mavhiripu
Kuti ukwanise kudzora musuwo mushe kune chiyero chaicho, uchaendesa zvinhu zvakawanda zvakasiyana. Izvi zvinosanganisira kutamisa switch dzemwenje padivi pemikova, wiring inowanikwa mukati memadziro inofanirwa kufambiswa, uye zvigadziko zvemagetsi zvakare zvinoda kufambiswa kana vari munzira.
Kupamhamha Kweupamhi Kudiki Kwazvo wiricheya
Saizi chaiyo ye wiricheya mushandisi kugona kunyatsokwana kuburikidza nemusuwo wakareba 32 inches. Kazhinji, madhoo anoyerwa pamasendimita makumi maviri nemana kusvika makumi maviri nenomwe; izvi zvaisazove zvakaenzana zvakakwana kuti mushandisi akwanise kupfuura.
Sharp Inotendeuka Mushure megedhi
Kana paine pakapinza kana pakamanikana nzira yaunofanirwa kugadzira kuti ugone kupinda nemusuwo, panofanirwa kuve nemvumo yakawanda kuitira kuti mushandisi abudise munzira yakamanikana kana kamuri.
Upamhi hweMukova we wiricheya upindo
Kufara kwegonhi rechivako kunogona kuita kuti muridzi wemba ashandise mari kugadzirisa magonhi kana asina kupamhama zvakakwana. mavhiripu. Kutsvaga kontrakta kuti azviite uye kubhadhara muhomwe kunogona kudhura kumabhizinesi madiki-epakati saizi.
Hurumende inopa Specialty Adapted Housing Grant, iyo inogona kubatsira kubhadharira mari yekugadzirisa upamhi hwemasuo.
Kugadziridza Imba ye wiricheya Accessibility
Kana iwo madhoo ari akatetepa zvakanyanya mumba mako, anogona kuwedzerwa kuburikidza nekugadziriswazve kwemadziro uye mapindiro. Iwe ungangoda kubvisa yeyuniti yemusuwo uye yemusuwo trim kuti ukwanise kunyatso kudzora musuwo.
Hallway Width ye mavhiripu
Upamhi hweMukova we Mawiricheya Akamanikana
Huwandu hwenzvimbo inofanirwa kune yakatetepa kana yakatetepa wiricheya kupinda nepasuo idiki zvakanyanya kudarika zvingave zvechigaro chenguva dzose. Izvi zvinodaro nekuti chigaro chakagadzirirwa chaizvo kuti chive chakatetepa muhupamhi kupa mushandisi ihwo hupamhi hwepasi rose hunogoneka werudzi urwu rwechigaro. Izvi zvinogonesa mushandisi kuti apinde nemusuwo asinga sangana neADA zvirevo; chinhu chakadai chinowanzoitika kunze kweUS.
mavhiripu for Narrow Doorways - ADA wiricheya Clearance
Kana iwe uri mune mamiriro ezvinhu nzvimbo dzaunowanzo svikira zvisingaenderane neADA (ingangodaro iri kumaruwa nenzvimbo dziri kunze kweUS) iwe uchafanirwa kutarisa mukutenga wiricheya yakagadzirirwa mikova yakamanikana / mukoridho. Nzira iri nyore yekutanga kutsvaga iyi kutsvaga chekufambisa mavhiripu.
Narrow Yekutakura Wiricheya
senga mavhiripu ndiwo mamwe macheya akatetepa zvikuru aripo nhasi, mamwe acho achisvika pakadzika 20” upamhi hwese. Iwo macheya akatetepa zvakanyanya muchikamu ichi mavhezheni evana emhando yega yega, sezvo saizi yavo yechigaro ichigona kudzikira se14 ”sese, izvo zvaizoita kuti iwe ugone kupfuura nemusuwo nehupamhi hwemakumi maviri nemana”(hazvikurudzirwe. )
Kune avo vanhu vaunofamba navo rubatsiro a wiricheya, kuwanikwa kunoreva kuva simba kufambisa zvakasununguka mukati mese imba pasina zvipingamupinyi se matanho kana madhoo madiki.
Dzimba dzekare vakanga vasina yakavakwa ne rudzi urwu yekuwanika mupfungwa, uye inofanirwa kushandurwa so kuti vagare zvinodiwa ye remara mugari.
Yakakurudzirwa Suo Rupamhi kune wiricheya upindo
Most mavhiripu kuyera 24 kusvika 27 inches yakafara kubva pavhiri kuenda kune vhiri. so nokuti wiricheya kuvhiyiwa uye kufamba zvakasununguka kuburikidza nemusuwo, musuwo unofanirwa kuve zvishoma 32 inches paupamhi . Kana musuwo inowanikwa munguva nzira, uye inoda kuti iyo wiricheya shandurwa undergo iyo, musuwo unofanira kuyera zvishoma 36 inches paupamhi. Kana iwe uchigamuchira mari kubva kune Inonyanya Kugadziridzwa Housing Grant, masuo anofanira kunge ari zvishoma 32 inches paupamhi uye mukoridho inofanira kuve zvishoma 42 inches paupamhi kusvika masutu izvo zvinodiwa yemubhadharo.
Most mavhiripu kuyera 24 kusvika 27 inches yakafara kubva pavhiri kuenda kune vhiri.
Kuti uwane wiricheya kuvhiyiwa uye kufamba zvakasununguka kuburikidza nemusuwo, musuwo unofanirwa kuve zvishoma 32 inches paupamhi .
Kumwe Kufunga, kana unosarudza kuva nazvo musuo wakagadziriswa, iwe uchada kutamisa switch dzemwenje uye zvigadziko zvemagetsi. unenge uchida kuumba chokwadi icho pane zvishoma 2 tsoka dzenzvimbo yepasi yakajeka padivi pemusuwo unodhonzera mukati. kushandiswa yeinosimudza-kure hinges uye anowedzera masuo anogona kuwedzera upamhi hwedhi ne zvishoma 2 masendimita.
New Kuvaka uye wiricheya upindo
Mukuvaka kutsva, vazhinji vavaki vanokurudzira hupamhi hwemasendimita makumi matatu nemasendimita kusvika makumi matatu nemasendimita uye upamhi hwenzira yemasendimita makumi mana nemasere ekugadzira, kunyaradza, uye nyore kufamba. Kune avo vanhu vanogamuchira mari kubva kuSpecially Adapted Housing Grant, kuvaka kutsva kunofanirwa kusanganisira masendimita makumi matatu nemasere uye 36-inch nzira
Yakanakisa Wiricheya Mhando
Wiricheya Sarudzo idzo Dzinobatsira kune Yakatemwa Kufamba
Matipi Ekutenga Simba Mawiricheya